Abadlali abazizigidi ezingama-20 badlala iPUBG Mobile qho ngenyanga | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Izaziso, PUBG Imfono
Kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo iPUBG Mobile yasungulwa, idabi ekuthiwa namhlanje lifikelele kwinani labasebenzisi abazizigidi ezingama-20 kwihlabathi jikelele. Ngokuqinisekileyo irekhodi lomdlalo oza kutshintsha iparadigm yokudlala kwiselfowuni.
Umdlalo omkhulu kumgangatho wobugcisa ngesizathu esinye kuphela: ihamba ngoloyiko (ngaphandle kokusebenzisa ibhetri eninzi) kwi-smartphone. Into angenakuyithetha uFortnite, kutshanje kukhutshwa Epic Imidlalo, kwaye ifuna izixhobo ezininzi kunye nokusebenzisa amandla ebhetri angaphezulu.
Uhlaziyo emva kohlaziyo, ngokonyuka rhoqo kwiinyanga ezimbini kubandakanya iimephu ezimbini, enye ye-Miramar, kunye enye yeSanhok, Imidlalo yeTencent ibonisa ukuba isebenza kakuhle kakhulu ukufikelela kwizigidi ezingama-20 zabadlali abasebenzayo ngenyanga.
Abasebenzisi be-20 yezigidi abasebenzisa imihla ngemihla kwiinyanga ezi-6! Enkosi ngokusisa apha, #kwimobile Iqela! pic.twitter.com/l8ubeDJllr
- IPUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) Septemba 13, 2018
Umzobo obonisa loo nto kukho umhlaba omninzi onokuwuhlola kwimidlalo ehambayo kwaye ngakumbi kubadlali abaninzi, kuba ukufikelela okunikezelwa yi-smartphone kwimidlalo ye-Intanethi ngokuchasene nabanye abadlali kuphantse kungalingani nakwezinye iiplatifomu. Oko kukuthi, apha phezulu emthini ndingadlala umdlalo ndidlala yam PUBG Iselfowuni ngokuchasene namakhulu abadlali.
Ngemigca yethu besisazisa nganye yezi zihlaziyo, kunye nezikhokelo ze ube ngumdlali ongcono o fumana yonke incindi kunokwenzeka eyafika phakathi ehlotyeni ngeendaba ezitsala amehlo kanye nje ngexesha elitsha lePUBG Mobile.
Kananjalo asilibali Inguqulelo ye-beta iyafumaneka for vavanya phambi kwakhe nabani na iindaba zePUBG Mobile, okanye uguqulelo lwe-lite izixhobo ezinomthamo osezantsi kwimithombo.
Izigidi ezingama-20 zabasebenzisi abasebenzayo rhoqo ngenyanga kwiPUBG Mobile ebonisa ukuba wenza kakuhle kangakanani umdlalo oza kutshintsha indawo enkulu yokudlala.
I-PUBG MOBILE: Emva
Umthuthukisi: Inqanaba elingenasiphelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » PUBG Imfono » I-PUBG Mobile ifikelela kwizigidi ezingama-20 zabasebenzisi abasebenzayo behlabathi kwiinyanga nje ezi-6
Ukutyhila, usetyenziso olunomdla lokwenza amaBali e-Instagram ngendlela elula